Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chikumi 16, 2021
Sangano revadzidzisi vemuzvikoro zvepamusoro, reCollege Lecturers Association, pamwe nesangano reCouncil for Students Teachers, asvitsa nhasi chikumbiro kubazi redzidzo yepamusoro chekuti zvidzidzo muzvikoro izvi zviitwe pamadandemutande senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 muzvikoro izvi.
Chikumbiro ichi chaitwa zuva rimwe chete hurumende yazivisa kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 nezuro uye vamwe mazana maviri nemakumi mana nemumwe chete vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare.
Mutori wenhau anoshandira New York Times, Jeffry Moyo, aburitswa mujeri nhasi mushure mekupihwa nedare repamusoro nemusi weMuvhuro mukana wekubhadhara mari yechibatisokuitira kuti atongwe achibva kumba kwake.
Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reThe Day of the African Child ichikurudzirwa kuremekedza zvibvumirano zveAgenda 2040 zvinosanganisira hupenyu hwakanaka hwevana pamwe nehutano hwavo.
Vagari vekwaMutare vonetsana nekanzuru yavo pamusoro pemashandisirwo ezvivakwa zvekanzuru iyi zvinobatsira veruzhinji.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri mhiri kwemakungwa, VaNavile Mkhululi Mehluli Mchina, voshandisa njere nemichina yechizvinozvino kushandura michero nemiriwo zvaisimboraswa kuve chikafu kuburikidza nekambani yavo ye Invisible Foods.
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, zuva reThe Day of the African Child pamwe nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechirwere cheCovid-19.